TSY AFAKA MANOMBOKA MIJERY NY ADOBE PHOTOSHOP CS5 - PHOTOSHOP - 2019
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika
Ny fifandraisana mifanentana amin'ny solosaina finday dia omena amin'ny rindrambaiko mety. Tsy misy fanavahana an'ity fitsipika ity sy ny fitaovana samples an'ny modelin'i NP350V5C.
Fametrahana mpamily ho an'ny Samsung NP350V5C
Misy fomba dimy farafaharatsiny mba haka sy hametraka rindrambaiko ho an'ny fitaovana voakasik'izany, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ny tombony sy ny fiheverany, izay hohamarinintsika eto ambany.
Ny ankamaroan'ny mpamily dia mora hita amin'ny loharanon'ny mpamorona azy.
Mandehana any amin'ny vavahadin'ny tranonkala Samsung. Rehefa ahemotra ilay pejy dia tadiavo ilay singa ao amin'ny lohatenin'ity pejy ity. "Support" ary tsindrio eo.
Avy eo, tadiavo ny tadi-fikarohana, izay miditra ny isa amin'ny haben'ny model, eo amin'ny raharaha NP350V5C. Hisy lisitr'ireo karazam-pandaharana manokana hokarohina, ka ao anatin'izany dia mila mifidy ny anao ianao. Ny anarana marina momba ny fampivoarana laptop dia azo jerena eo amin'ny labozia, fa tsy ny azy ihany.
More: Fantaro ny nomeraon'ny finday
Ity vaovao ity dia azo jerena ao amin'ny antontan-taratasy ho an'ny fitaovana. Rehefa avy nanapa-kevitra ny modely marina dia tsindrio ny rohy miaraka amin'ny anarany.
Ao amin'ny pejy fitaovana dia tsindrio ny rohy "Lohateny sy toro-lalana".
Aorian'izany dia tadiavo ilay sakana "Downloads". Mampalahelo fa tsy afaka mandefa ny mpamily rehetra atsy ho atsy, noho izany dia mila miara-miasa amin'ny tsirairay ianao amin'ny alalan'ny fanindriana ny bokotra "Zavatra" eo akaikin'ny anaran'ilay singa.
Raha hijery ny lisitry ny rindrambaiko lehibe dia tsindrio "Asehoy bebe kokoa" ao amin'ny faran'ny lisitra maina.
Misy mpamily sasantsasany ao anaty rakitra, noho izany dia ataovy izay hahazoana antoka fa manana rakitra ao amin'ny solosainao ianao. Raha tsy misy, azonao atao ny mampiasa ny fitaovana ao amin'ny rohy eto ambany mba hifidianana ny vahaolana mety.
Jereo koa: Best analoges WinRAR
Atsofeno ny rakitra azo alaina ao amin'ny installer mba hanombohana ny fametrahana rindrambaiko.
Atsafao ny fitaovana manaraka ny torolalana. Avereno atao ny fomba fiasan'ny mpamily sisa tavela.
Ho an'ity fandalinana ity dia azo raisina ho feno. Ny tsy fahampian-tsakafo dia ny haingam-pandeha amin'ny rindrambaiko maimaim-poana avy amin'ny tambajotra Samsung.
Samsung dia mahafantatra ny tsy fitoviana amin'ny fampidinana ireo mpamily avy amin'ny tranonkalany, noho izany dia nanomana fitaovana rindrambaiko manokana hanatsarana ny dingana.
Avereno indray ny dingana 1-2 amin'ny fomba voalohany, saingy tsindrio ity "Rohy mahasoa".
Mitadiava sakana "Samsung Update" ary tsindrio "Vakio bebe kokoa".
Hisy takelaka vaovao misokatra, izay hanombohana ny rindrambaiko ny rindrambaiko - afa-tsy amin'ny toerana mety amin'ny rakitra mafy. Mariho fa ny rakitra fametrahana dia rakotra ao amin'ny arisiva.
Esory ny rakitra EXE amin'ity program ity ary hazavao io. Manomboka ny dingana fametrahana.
Any amin'ny faran'ny fepetra dia tsindrio "Close".
Ny rindrambaiko dia tsy mandefa fohy "Desktop", azonao atao ny mamoaka azy avy amin'ny sakafo "Atombohy".
Ny baran'ny fikarohana dia hita eny an-tampon'ny varavarankely fampiharana lehibe - midira ny anaran'ny solosaina ao NP350V5C ary tsindrio Ampidiro amin'ny klavier.
Ny NP350V5C no anaran'ilay raki-tsarimihetsika, noho izany dia hisy lisitry ny fiovana misy eo aminy. Mitadiava ny tsara indrindra amin'izy ireo (ny fomba famaritana dia voafaritra amin'ny fomba voalohany) ary tsindrio avy eo LMC amin'ny anaran'ny fitaovana.
Andraso ny fitaovana hanangona sy hanomanana ny vaovao ilaina. Any amin'ny faran'ity dingana ity amin'ny faran'ny varavarankely dia tsy maintsy mifidy rafitra iray ianao.
Mitandrema! Ny rafi-pandrafetana sasantsasany amin'ny fanovana sasany amin'ny ordinatera dia tsy tohanana!
Hanomboka ny dingan'ny famolavolana rakitra ho an'ny download. Farany dia fantaro ny tenanao miaraka amin'ny lisitr'ireo rindrambaiko maimaim-poana, raha ilaina, manaisotra na manendry toerana, ary tsindrio "Export" mba hanomboka ny fametrahana sy fametrahana ireo fitaovana.
Ny tombontsoa azo avy amin'io fomba io dia miharihary, saingy miteraka tsy fahampian'ny tranonkala ofisialy izy io: ny haingam-pandeha fidirana amin'ny serivisy, ka izany no mahatonga ny fandefasana lalaovina ela. Ankoatr'izay, misy ny fahafahana maka ny rindrambaiko tsy mety, dia aoka ho azo antoka tsara.
Fomba 3: Mpanjifa mpamily fahatelo
Fomba hafa amin'ny famokarana mpampiasa Samsung dia fampiharana ampaham-batana hafa ho an'ny mpamily, izay mety amin'ny fitaovana rehetra avy amin'ny mpamokatra rehetra. Nomaninay fohifohy ny vokatra tsara indrindra amin'ity sokajy ity, izay manoro anao hamaky.
Ho an'ny Samsung NP350V5C, tsara ny mampiasa DriverMax - ny tahiry be dia be ao amin'ny programa dia mifanentana amin'ny fitadiavana rindrambaiko ho an'ny karazany hafa.
Vakio bebe kokoa: Fanavaozana ny mpamily mampiasa DriverMax
Fomba 4: Fanondroana fitaovana
Mba hamahana ny olantsika amin'izao fotoana izao, afaka manao ny programa ivelan'ny antoko hafa ianao, satria azonao atao ny mikaroka ireo mpamily amin'ny anaran'ny singa iray samihafa - ID ny fitaovana. Ny fomba fisainana dia ny fametrahana ity ID ity ary avy eo mampiasa tranonkala manokana.
Mora ny fandehan-javatra, saingy raha misy ny olana, dia vakio ilay boky torolàlana nomen'ny mpanoratra antsika.
Vakio bebe kokoa: Mitady mpamily ho an'ny ID mpamily izahay
Fomba 5: Windows System Tool
Ny fomba tsotra indrindra dia ny mahita sy manamboatra mpamily amin'ny alalan'ny "Manager Manager"Ampifandraisina amin'ny mpandrindra Windows amin'ny fitaovana mifandraika. Raha mampiasa io fomba io ianao, dia manoro anareo ny famakiana ireo torolàlana ampiasaina "Manager Manager" ho an'ity asa ity. Saingy ilaina ny mitadidy fa ity fitaovana ity dia mety tsy hahita ireo mpamily amin'ny fitaovana manokana na efa ela.
Vakio bebe kokoa: Mampifandray ireo mpamily amin'ny fitaovana an-tserasera isika.
Nandinika fomba dimy misy fomba fandefasana sy fametrahana mpamily ho an'ny laptops an'ny Samsung NP350V5C izahay. Raha fantatrao safidy hafa, azafady zarao amin'ny fanehoan-kevitra.